Kenya na -agbatịkwu oge ịlọta, machibido nnọkọ ọha niile dị ka mkpị COVID
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya » Kenya na -agbatịkwu oge ịlọta, machibido nnọkọ ọha niile dị ka mkpị COVID
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Minista ahụike Kenya Mutahi Kagwe
Ọnụ ọgụgụ ọrịa na -arị elu kwa ụbọchị ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, otu afọ site na ntuli aka izugbe, na -eme nnukwu ngagharị iwe n'ofe mba ahụ.
Ọnụ ọgụgụ ikpe COVID-19 ọhụrụ na-agbasa na Kenya.
Kenya agbatịla oge ị ga -eji na -alọta abalị.
Ọrịa coronavirus ọhụrụ na -ejupụta n'ụlọ ọgwụ Kenya.
Onye Kenya Minista Ahụike Mutahi Kagwe kwupụtara taa na mba ọwụwa anyanwụ Afrịka na-agbatịkwu mgbede abalị wee machibido nnọkọ ọha na nzukọ onwe onye iji kwụsị mgbasawanye nke COVID-19.
Kenya, n'ime ụbọchị ndị na-adịbeghị anya, ahụtala mmụba na ikpe COVID-19 ọhụrụ sitere na Delta dị iche iche, yana ọnụ ọgụgụ dị mma nke pasent 14 ruo Fraịde ma e jiri ya tụnyere ihe dị ka pasentị asaa n'ọnwa gara aga.
“Mgbakọ ọha niile na nzukọ onwe onye nke ụdị ọ bụla na-akwụsị na mba niile. N'akụkụ a, gọọmentị niile, gụnyere nzukọ na nnọkọ gọọmentị, ga -agbanwe ugbu a ka ọ bụrụ nke mebere ma ọ bụ yigharị ya n'ime ụbọchị iri atọ na -abịanụ, ”Kagwe kwuru na adreesị televishọn na Fraịde, na -adọ aka na ntị na ụlọ ọgwụ obodo na -akarị ike.
O kwuru na ọnụego positivity dị n'ihe ize ndụ ịrị elu ọ gwụla ma e mere ihe siri ike.
"Anyị na-aga n'ihu na-arịọ ndị Kenya niile, gụnyere ndị natara ọgwụ mgbochi COVID-19, ka ha ghara ịda mbà," Kagwe kwuru mgbe nzukọ nke Kọmitii Nzaghachi Mberede Mba na Coronavirus.
Kenya anọwo n'ụdị oge ọ na -alọta kemgbe ọnwa Machị afọ gara aga mgbe ọrịa mbụ bidoro, Kagwe kwukwara na a ga -agbatị ya na mba niile site n'elekere iri nke abalị ruo elekere anọ nke ụtụtụ ruo oge amara ọzọ.
Dị ka ọtụtụ ndị agbata obi ya, Kenya mere ihe ngwa ngwa megide COVID-19 na mbido oria ojoo, na-egbochi mmegharị na imechi ókèala na ụlọ akwụkwọ.
Mana ọnụọgụ ọrịa na -arị elu kwa ụbọchị ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, otu afọ site na ntuli aka izugbe, na -eme nnukwu ngagharị iwe na mba ahụ dum.
Mwepụta nke ọgwụ mgbochi ejirila nwayọ nwayọ na Kenya, akụkụ ya n'ihi ụkọ ọkọnọ.
Kenya agbaala ọgwụ nde mmadụ 1.7, n'ime ha 647,393, ma ọ bụ pasent 2.37 nke ndị okenye, na -agba ọgwụ mgbochi ọ bụla.
Na mkpokọta, Kenya edeela ihe karịrị ikpe 200,000 COVID-19 na ọnwụ 3,910.
na -adọ aka na ntị na ụlọ ọgwụ na -agwụ ike.